राति १२ बजेदेखि बिहान ५ बजेभित्र हुन्छ अत्याधिक दुर्घटना, कारण रहेछ यस्तो
Monday, 21 May, 2018 1:20 PM
संसारभर सबैभन्दा बढी सडक दुर्घटना रातको १२ बजेदेखि बिहान ५ बजेका बिचमा बढी हुने गरेको छ। यो त्यस्तो समय हुन्छ जब मानिसमा निद्रा धेरै हावी हुन्छ । कसरी पहिचान गर्ने निद्राको यो संकेतहरुलाई ?
पाँच सेकेन्डको झिमिक्क
रातमा खाली सडक हुने भएकाले आमरुपमा मानिसहरु गाडी तिब्र गतिमा चलाउने गर्दछन् । १०० को स्पीडमा ५ सेकेन्ड निद्राले झिमिक्क पार्दा गाडीले १७५ मिटरको दूरी तय गरिसकेको हुन्छ ।
एउटै लेनमा रहन नसक्नु
अँधेरोका कारण आँखामा जोड पर्दछ । त्यसै पनि निद्राको पहिलो संकेत गाडीको पोजिसनबाट प्राप्त हुन्छ । थाकेको चालकले आमरुपमा गाडी एउटै लेनमा चलाउन सक्दैन । उ कहिले बाँया त कहिले दायाँ जान लाग्दछ।
निद्रा वा बढी थकानको स्थितिमा चालकले सिग्नल र ट्राफिक चिन्ह त देख्छ तर उ त्यसअनुसार तत्काल प्रतिक्रिया जनाउन सक्दैन । थकानको पहिलो असर मस्तिष्कको सूचना प्रोसेसिङ गर्ने प्रक्रियामा पर्दछ । यो प्रक्रिया सुस्त हुन्छ ।
ध्यान एकै स्थानमा अडिनु
गाडी चलाउने बेलामा आमरुपमा मानिसहरु बिच बिचमा दायाँबायाँ हेर्ने गर्दछन्, बिचबिचमा मिरर पनि चेक गर्दछन् । तर निद्राको अवस्थामा आँखाका परेलाहरु एउटै स्थानमा केन्द्रित हुन लाग्दछ । यसलाई वार्निङ्ग संकेत भनेर बुझ्नु पर्दछ ।
पछिल्लो दुई किलोमिटर
गाडी चलाउने बेलामा यदि कसैले तपाईलाई सोध्यो कि पछिल्लो दुई किलोमिटरको बाटो कस्तो थियो, तब थकानको सही अन्दाजा लगाउन सकिन्छ । अलर्ट दिमागले बताउन सक्दछ कि पछिल्लो दुई किलोमिटरमा तपाईले के के देख्नुभयो, सडक कस्तो थियो । तर थाकेको मस्तिष्कले यो कुरा बताउन सक्दैन ।
आँखा झिमिक्क हुनु
यदि राति गाडी चलाउने बेलामा पटकपटक निद्राले आँखा बोझिलो हुन लाग्यो, तपाईको आँखा मलिलो हुन लाग्यो वा आँखालाई जोड लगाएर ठुलो गर्ने कोशिस गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने बुझ्नुस, खतरा छ । यस्तो अवस्थामा पहिला नै सावधान हुनु जरुरी छ।
यस्तो अवस्थामा के गर्ने ?
यदि शरीर निकै थाकेको छ भने गाडी चलाउनुअघि कम्तीमा पनि एक वा दुई घण्टा मस्त निदाउनुस् । एक वा दुई घन्टाको ढिलाई जीवनभरको विष्मतभन्दा कयौ गुना राम्रो हुनेछ । यात्राका क्रममा निद्राको संकेत पाउने बित्तिकै गाडीलाई सुरक्षित स्थानमा साइड लगाउनुस् र आराम गर्नुस् । चिया, कफी वा चर्को स्वरमा संगीतको भरोसामा कहिल्यै नबस्नुस् । एजेन्सीहरुको सहयोगमा